Istaraatiijiyaddaada Suuq-geynta Macluumaadkaaga 2015 miyuu daboolayaa Isbeddelladan? | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 28, 2015 Arbacada, Janaayo 28, 2015 Douglas Karr
Content Suuq ayaa hogaaminaya xirmooyinka isbeddelada suuqgeynta dijitaalka ah ee 2015, oo ay ku xigto Xog Weyn, Email, Suuqgeyn toos ah iyo Mobile. Maaha wax la yaab leh, in mudnaantaasi ay ka muuqato hay'addeenna halka aan ka soo kicinnay a Macluumaad weyn mashruuca waxaan u horumarinay daabacaad weyn oo khadka tooska ah ku shaqeysa. Macluumaad weyn waxay noqoneysaa daruuri si fudud sababtoo ah mugga iyo xawaaraha xogta aan aruurineyno oo aan falanqeyneyno si aan u saadaalino ugana warbixino waxqabadka dadaalada suuq geynta waxyaabaha.
Ganacsiyada ka kala socda dhammaan suuqyada iyo tooska ayaa dejinaya qorshayaal la taaban karo oo lagu xoojinayo dadaalkooda suuq-geynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin, sida suuqleyda B2B oo kordhinaya miisaaniyaddooda suuq-geynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo abuurista waxyaabo ka badan wixii ay waligood horay u sameeyeen. Xitaa astaamaha waaweyn ayaa ku biiraya dagaalka, iyadoo in ka badan 69% ay si joogto ah u kordhinayaan wax soo saarkooda ayna sii wadi doonaan sidaas 2015. Jomer Gregorio, CJG Digital Marketing
CJG waxay aqoonsatay 8 Isbeddellada Suuqgeynta Mawduuca ee ku badan xeeladaha suuqgeynta waxyaabaha sannadkan:
Suuqgeynta Mawduucyada ayaa sii badnaan doonta bartilmaameed iyo mid shaqsiyeed.
Suuqgeynta Mawduucyada ayaa adeegsan doonta wax badan meelaynta la bixiyay.
Suuqgeynta Mawduucyada ayaa adeegsan doonta wax badan suuq-geynta suuqa.
Suuqgeynta Mawduucyada ayaa adeegsan doonta wax badan qorayaal xirfadlayaal ah.
Suuqgeynta Mawduuca ayaa diiradda saari doonta inbadan qaybinta.
Suuqgeynta Mawduuca wey guursan doontaa marketing warbaahinta bulshada.
Suuqgeynta Mawduuca ayaa kor u kici doonta marketing mobile.
Suuqgeynta Mawduucyada ayaa supernova ku la socon doonta sheeko sheeko muuqaal ah.
Tags: 2015Content Suuqisbeddellada suuqgeynta
Febraayo 4, 2015 saacadu markay tahay 6: 09 AM
Halkan waxaa ku yaal sharraxaad aad u wanaagsan oo ku saabsan isbeddellada maanta ee suuq-geynta waxyaabaha Waxaan u maleynayaa in siddeed istiraatiijiyad suuq-geyn suuq-geyn ah ay waxtar noo leeyihiin oo hadda-maalmahan dhammaantood ay ugu muhiimsan yihiin suuqgeyn kasta. Iyo sidoo kale matalaad Info-graphic ah ayaa la siiyaa aad u fiican.Waad ku mahadsan tahay maqaalkan wanaagsan!
Apr 13, 2015 at 9: 21 AM
Shaki kuma jiro in waxyaabahaasi ay yihiin shidaalka shabakadaada sidaa darteed waa inaad hubisaa inaad isticmaasho shidaal tayo leh si aad si habsami leh ugu socodsiiso websaydhka. Si la mid ah tan, halkan waxaad ku sharaxday dhammaan dhinacyada suuq-geynta waxyaabaha ku saabsan isbeddellada ugu dambeeyay.